Mampiseho ireo mpikatroka tamin’ny Hetsika Elo sy ilay mpanao sariitatra ara-politika Badiucao ny Herinandron’ny Fahalalaham-pitenenana ao Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Oktobra 2018 6:51 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Español, русский, English
Nilatsaka ny hetsika taoriana kelin'ny nandavan'ireo manampahefana ao Hong Kong ny fanavaozana ny visa ho n'ny asa ho an'ilay tonian-dahatsoratry ny Financial Times ,Victor Mallet. Roa volana monja talohan'ny nandàvana ny visa-ny, nanatontosa resaka natolotr'ilay mpikatroka mampiadi-hevitra mpomba ny fahaleovanten'i Hong Kong, Andy Chan i Malet.
Saingy tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, nanamafy bebe kokoa ny heriny manerana an'i Hong Kong i Beijing. Niatrika fanenjehana mahery vaika ireo Hong Kongers izay manohana ny zo demaokratika bebe kokoa, tahaka ny fifidianana marina, na fahaleovantena tanteraka. Nahitana olom-pirenena Hong Kong an'arivony nidina an-dalambe nitaky ny zo feno hifidy ilay fihetsiketsehana antsoina hoe “Umbrella Movement” tamin'ny taona 2014, saingy nofoanan'ny manampahefana..
Ny 1 Jolay 2017, nanambara “tsipika mena” mandràra izay soso-kevitra momba ny fahaleovantena ho an'i Hong Kong tamin'ny lanonana fankalazana ny faha-20 taonan'ny fiverenan'i Hong Kong tany Shina tamin'ny taona 1997 ny filoha Xi Jinping. Nanomboka tamin'izany dia nihitatra ho any amin'ny soso-kevitra momba ny fizakantena ary koa ny fanatanterahana resaka momba ny fahaleovantenan'i Hong Kong, tahaka ny raharaha Andy Chan ny “tsipika mena”.
Hanomboka amin'ny fampiratiana irery voalohany iraisam-pirenena natokana ho an'ilay mpanao sariitatra politika teratany Shinoa sady mpanakanto Badiucao amin'ny 3 Novambra ny Free Expression Week. Nahazo ny lazany tao amin'ny Twitter i Badiucao, tamin'ny fanaovana sariitatra ara-politika izay manohitra ny sivana sy ny jadona ao Shina. Nasongadin'ny The New York Times sy ny The Guardian ny sangan'asany.
Ny voambolana hoe “Gongle” dia kilalaon-teny, maneho hevitra momba ny ezaky Google hiditra indray ao Shina miaraka amin'ny milina fikarohana voasivana. Ny teny Gongle dia mitovitovy amin'ny “共” amin'ny teny shinoa – fanafohezana ny Antoko Komonista – “共产党.”
Voasazy higadra 11 taona an-tranomaizina tamin'ny taona 2009 ilay mpiaro ny demaokrasia Shinoa sady mpitsikera literatiora Liu Xiaobo noho ny “fitarihana famadihana ny fahefam-panjakana” tamin'ny fandraisany anjara tamin'ny Charter 08, fanambarana iray mitaky fanavaozana demokratika ao Shina. Nahazo ny loka Nobel momba ny fandriampahalemana izy tamin'ny taona 2010 noho ny asany momba ny zon'olombelona. Namoy ny ainy noho ny aretin'aty izy tamin'ny taona 2017.
Nandray anjara lehibe tamin'ny fihetsiketsehana manohana ny demokrasia “Umbrella Movement” tamin'ny taona 2014 i Joshua Wong. Voampanga noho ny fivoriana tsy ara-dalàna i Wong ary voasazy higadra enim-bolana nony farany. Niharan'ny fanarahamaso nokendrena ihany koa izy.
Mampiseho tanora mpikatroka dimy mikasika ny niatrehan'izy ireo ny fiantraikan'ny Hetsika Elo ny Last Exit to Kai Tak. Ahitana an'i Joshua Wong, ilay mpihira malaza sady mariky ny demaokrasia Denise Ho, ilay mpikambana ao amin'ny antoko politika pan-demokraty Wong Yeung Tat, ilay mpikarakara ny Ed Lau ary ilay mpikatroka Derek Lam ny vondrona.